डि मारियालाई चार खेलमा प्रतिबन्ध - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home खेल डि मारियालाई चार खेलमा प्रतिबन्ध
पेरिस । फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का अर्जेन्टिनी विंगर एन्जल डि मारिया चार खेलको प्रतिबन्धमा परेका छन् । फ्रेन्च लिग वानअन्र्तगत अघिल्लो साता मार्सेविरुद्धको खेलमा भएको घट्नामा मुछिएका कारण अनुशासन समितिले उनलाई चार खेलको प्रतिबन्ध सुनाएको हो ।
निकै तनावपूर्ण खेलमा रेफ्रीले ५ रातो कार्ड र १२ पहेंलो कार्ड देखाएका थिए । दुई टोलीका खेलाडीबीच घम्साघम्सी हुँदा रेफ्रीले हात हालेका खेलाडीलाई कार्ड देखाएका थिए । पछि अनुशासन समितिले कार्ड प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई थप कारबाही गरेको थियो । डि मारियाले मार्सेका डिफेन्डर अल्भारो गोन्जालेजलाई थुकेको आरोप प्रशिक्षक आन्द्रे भिलास बोसले लगाएका थिए । यद्यपि, लिगले सजाय सुनाउँदा थुकेको बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन । समितिले नेयामारले अल्भारोमाथि लगाएको रंगभेदको आरोपबारे भने अझै छानबिन गरिरहेको छ । सेप्टेम्बर ३० मा बस्ने बैठकले यसबारे विस्तृत निर्णय गर्नेछ । यसअघि अनुशासन समितिले नेयमारलाई रातो कार्डको एक खेल प्रतिबन्धमा थप एक खेल प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसबाहेक समितिले नेयमारले प्रतिबन्ध पूरा भएपछि पुनरागमन गरेको खेलमा पनि सोही व्यवहार देखाएमा स्वतः एक खेल प्रतिबन्ध थपिने निर्णय पनि गरेको छ । पीएसजीका मिडफिल्डर पारेडेसले पनि थप एक खेल तथा मार्से डिफेन्डर जोर्डन अमाभीलाई खुट्टाले हानेका पीएसजीका डिफेन्डर लेभिन कुर्जावाले भने ६ खेल प्रतिबन्ध भोगिरहेका छन् । अमाभीले पीएसजीका खेलाडीलाई मुक्का हानेपछि कुर्जावाले जवाफमा लात हानेका थिए । मार्सेका अमाभीलाई पनि ३ खेल प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मार्सेका फरवार्ड डारियो बेनडेट्टोले पनि २ खेल प्रतिबन्धमा छन् ।
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - October 20, 2020
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री माननीय भानुभक्त ढकालले भिडियो सन्देश जारी गर्दै दशै, तिहार, नेपाल सम्बत, छठ लगायतका चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह...
उपत्यका भित्रन नगरपालिकाको अनुमति अनिवार्य, प्रशासनद्वारा सवारी पास बन्द
राजधानी समाचारदाता - June 14, 2020
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रनेको हकमा थप कडाइको नीति लिएको छ । अब काठमाडौं उपत्यका भित्रनेका लागि काठमाडौं उपत्यकास्थित स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य...
दोस्रो बेंसीसहर मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता शुरु
राजधानी संवाददाता - February 27, 2020
लमजुङ । लमजुङमा दोस्रो बेंसीसहरमेयर कप फुटबल प्रतियोगिता शुरु भएको छ । बेसीशहर नगर खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा नेपाल भ्रमण बर्ष...
उपभोक्ताका रूपमा हामी कति सचेत ?
बिचार देवीलाल चौलागाईं - July 31, 2020
हामी एउटा नागरिक साथै उपभोक्ता पनि हौं । हामी एक नागरिकको रूपमा जति सचेत छौं, त्यतिकै सचेत एक उपभोक्ताको रूपमा छौं कि छैनौं ?...
सरकारको लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन
Editor-Picks पूजा चँदारा - July 15, 2020
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । यस वर्ष एक हजार ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको गर्ने...
कर्णालीमा ९१६ जना कोरोना सङ्क्रमित
प्रदेश ६ रासस - June 13, 2020
सुर्खेत । कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । आज मात्रै सुर्खेतमा ४० र दैलेखमा ३० गरी जम्मा ७० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि...
दाङमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते
प्रदेश ५ ओपेन्द्र बस्नेत - June 3, 2020
तुलसीपुर । दाङको मसोट खोलामा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ भने २ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा ट्रक चालक...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - July 19, 2020
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक फेरि स्थगित भएको छ । आज (आइतबार) बस्ने भनिएको बैठक साउन ६ गते बिहान...
Breaking News सुदीप अधिकारी - July 19, 2020
थप ३१६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १२ जनाको मृत्यु
Breaking News राजधानी समाचारदाता - October 17, 2020
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ३ हजार १६७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक...
सुदीप अधिकारी - October 17, 2020